NgoMeyi 2020-Funda ukuRhweba
Inyanga: Ngamana 2020
Imiyalelo ye-SEC ye-Crypto Fin-Tech BitClave yokuhlawula i-25.5 yezigidi zeedola kwii-Depositors
Ukuhlaziywa: 31 May 2020
I-United States yezoKhuseleko kunye neKhomishini yoTshintshiselwano (i-SEC) iyalele ukubuyiselwa kwemali efikelela kwi-25.5 yezigidi zeedola kubabeki bayo kwi-tech-tech, iBitClave. Ikhomishini igwebe iBitClave ngokuqhuba umrhumo wokuqala ongekho semthethweni (ICO) eUnited States kwingxelo yeendaba ekhutshwe nge-28 kaMeyi.
I-SEC ixele ukuba nge-2017 ICO yayo, iBitClave ifumene i-25.5 yezigidi zeedola phantse kuma-9,500 abagcina imali. "I-BitClave ijolise ekusebenziseni i-ICO ukwenza, ukusebenza kunye nokukhuthaza iqonga lokukhangela abathengi elisekwe blockchain," yatsho i-SEC.
Inkampani igqibe kwelokuba ibuyisele zonke iinzuzo ze-ICO kubabeki bayo. Ikwenza oko ukuze ijongane ngokusondeleyo, ngeNgxowa-mali eyiyo esekwe yi-SEC. I-BitClave ibanga ukuba izityholo ze-SEC aziyi kwamkelwa okanye zaliwe.
Nangona kunjalo, kumzamo wayo wokugcina ukuthembeka, iBitClave ivumile ukuhlawula imali eyi-25.5 yezigidi, i-3,444,197 yeedola ngenzala kukhetho, kunye nenye i-400,000 yeedola.
Inkampani ityhile ngaphambi kwe-ICO yayo ngo-Novemba ka-2017 ukuba ikulungele ukuhlawula abasebenzisi be-Intanethi ngemvume yokusebenzisa iinkcukacha zobuqu kwintengiso ejolise kuyo. Le ndlela inceda iBitClave ukuba ivelise i-25.5 yezigidi zeedola ngaphakathi kwe-ICO yayo.
I-ICO ibonelele ngeTokethi yoMsebenzi wabaThengi (CAT). I-SEC iyayiqonda loo nto "IBitClave ayichazanga izibonelelo zayo kunye nentengiselwano ye-CAT, emele ukhuseleko."
Ngaphambi koku, i-SEC ibinyanzelise ukothuka kwezinye iintengiso.
IBitclave iyavuma ukuthobela iSec
IBitClave ikwagqibe kwelokuba icele ukuba iithokheni zayo zeCAT zikhutshwe kumaqonga ezorhwebo nge-crypto. Zonke iithokheni zeCAT ezisele zigcinwe kwinkampani ziya kugqithiselwa ukuze zikhubazeke ngokusisigxina kumlawuli wengxowa-mali.
Ngokolwazi lweCoinMarketCap, iithokheni zeCAT okwangoku zidweliswe kuphela kutshintshiselwano lweYoBit.
U-Kristina Littman, oyiNtloko ye-SEC yoThotyelo loLuhlu lweCyber ​​Unit uthe abaqhelekileyo okanye abanikezeli bezokhuseleko zedijithali kufuneka bathobele iimfuno zobhaliso lomthetho. Uye waqhubeka esithi amanyathelo ayalelwe yi-SEC kulo mnikelo wobuqhetseba uza kuzisa isiqabu esikhulu kubabeki mali.
tags IBitclave, Unikelo lwengqekembe yoqobo (ICO), Ikhomishini Yokhuseleko Notshintsho (SEC)
Ukuhlala okunokubakho kweBullish kuthintelwe kwi-GBPUSD Emva koRhoco oluPhezulu kwinqanaba le-1.2400
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPUSD-ngoMeyi 31
Kwiseshoni edlulileyo, isibini se-GBPUSD sibethe inqanaba le-1.2395, ukuphakama kweeveki ezimbini, ukubuyela ngokukhawuleza kwinqanaba lokuphinda ubuye emva koko ekubuyiseni nasekubambeni kwinqanaba le-1.2345. Ekupheleni kweveki, i-UK ibingakhange ibonelele ngedatha ye-macroeconomic ngoku kugxininiso kwisivumelwano seBrexit kunye neendlela ezivelayo zekoronavirus. Ngaphandle koko, umjikelo wokugqibela wale veki yencoko yase-UK-EU kulindeleke ukuba iqhubeke.
Amanqanaba okumelana: 1.3514, 1.2647, 1.2412
Amanqanaba enkxaso: 1.2075, 1.1792, 1.1409
Isibini se-GBPUSD sinokuthi siyigqibe iveki ngokukhula kodwa ngokwetshathi yemihla ngemihla, ifuthe lokunyanzeliswa linyanzelekile. Ukubuyela kwinqanaba eliphantsi likaSterling le-1.2247 libethe iiveki ezimbini eziphakamileyo kwinqanaba le-1.2395. Oko bekutshiwo, esi sibini asinakho ukuzinza kula manqanaba kwaye sawa ezantsi kwinqanaba le-1.2345.
Kwimeko ebanzi, nangona uguquko kwinqanaba le-1.1409 lilungile, akukabikho bungqina bokubuyela umva kwendlela. Ngayiphi na indlela, kwimeko yempindezelo eyomeleleyo, imeko inokuthi ihlale i-bearish okoko inqanaba lokuxhathisa le-1.3514 ligcinekile.
Inqanaba le-GBPUSD le-1.2075 yenqanaba eliqhubele phambili liye phambili kwiveki ephelileyo kwaye imeko yale veki ihlala phezulu. Iindlela zamva nje zibonisa ukuba i-1.1409 rebound isenokuqhubeka.
Enye i-rally inokubonwa kwinqanaba le-1.2647 kwaye ikhefu linokufikelela kuqikelelo lweepesenti ezingama-61.8 ukusuka kwi-1.1409 ukuya kwi-1.2647 ukusuka kwi-1.2075 ukuya kwi-1.2725 kumanqanaba alandelayo. Oko bekutshiwo, kwicala eliphantsi kwe-1.2247 yenqanaba lokuxhasa elincinci endaweni yoko linokutshintsha ukubuyela umva kwicala eliphantsi kwinqanaba le-1.2075.
Ubuthathaka be-GBPJPY kunokwenzeka ukuba uhlale ujikeleze inqanaba kwi-133.00 ngenxa yomngcipheko osezantsi weBrexit
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPJPY-ngoMeyi 31
Abahwebi banokugcina i-bias yokuthengisa kwi-GBPJPY kulindelo lokuba ubuthathaka beponti bunokwandisa ngakumbi kwikota ekufutshane. Njengomnqamlezo uhlala uhlala kwi-133.00, ujikeleze inqanaba. Iindaba ezingekho mthethweni zeBrexit zihlala zithomalalisa iponti, ngamahemuhemu aqhubekayo okuba iBoE (iBhanki yaseNgilani) inokuthi ibambe amaxabiso amabi.
Amanqanaba okumelana: 147.95, 138.68, 135.00
Amanqanaba enkxaso: 131.90, 126.54, 123.99
I-GBP iqhubekile nokusebenza kakubi kule veki iphelileyo. I-GBPJPY ivavanye ukunganyangeki kwinqanaba le-133.19 kodwa ayizange igqithe ngaphaya komzamo wokuqala, nangona kunjalo, inyathelo lesibini nelilungileyo lavela emva kokulungiswa kancinci.
Ukwaphula umthetho wokuchasa isitshixo kwi-133.19 kushenxise elinye inqanaba elinokubakho kwithagethi efanelekileyo, kwaye esi siphumo sijongeka ngathi sinokufika kwinqanaba le-135.00 lokuchasana okubalulekileyo. Nangona kunjalo, icala elinokubakho kwicala eliphantsi lenzelwe ukuba lityhale ngaphandle xa inqanaba lokumelana lihlala liqinile kwinqanaba le-147.95.
Ngaphandle kokuzama elinye ixesha lokutsala ngaphaya kwenqanaba lokumelana ne-133.45, i-GBPJPY ihlala iqinile njengoko uMeyi ephela. Ngelixa umkhwa ngokubanzi ubonakala ubambekile, abathengisi banokujolisa kulwahlulo oluphantsi kwenqanaba le-132.58 ngethemba lokuwa liye kwinqanaba le-131.90 kunye ne-130.60.
Xa kuthelekiswa, indawo kulindeleke ukuba ijongane nokuchasana okunzima kufutshane nenqanaba le-133.45. Ukuqala kokukhetha kwinqanaba lokumelana ne-135.76 ngoku kungaphezulu kule veki. Ukwahlulwa apho kuya kubangela ukukhula konke ukusuka kwi-123.99 ukuya kwi-135.76 ukusuka kwi-129.29 kwinqanaba le-137.00 kuqikelelo lweepesenti ze-61.8.
Isitalato i-Wall yaseMelika i-30 Sophula ukunganyangeki ngakumbi, ukuLala ubuso kwiNqanaba 26000
Iindawo eziKhuselekileyo: 28500, 29000, 29500
Iindawo eziNkxaso eziPhambili: 26000, 25500, 25000
Isalathiso sase-US Wall Street 30 sikwisitishi esinyukayo. Isalathiso sikwi-uptrend njengoko sifikelela kwindawo ephezulu ye-25632. Imarike yawa emva kokuchasana okuncinci. I-US Wall Street 30 iya kubuthana ngaphezulu kwenqanaba lama-26000 ukuba uxhathiso lokuqala lwaphukile.
Ii-SMAs zine-crossover ye-bullish njengoko iintsuku ezingama-21 ze-SMA ziwela ngaphaya kweentsuku ezingama-50 ze-SMA ezibonisa ukunyuka okuphezulu. Ixabiso lenyukele kwinqanaba lama-63 lexesha le-RSI 14. Imakethi ikwindawo ephezulu kwaye ingaphezulu komgangatho ophakathi 50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sikwisiteshi esinyukayo. Umzimba wekhandlela wokulungisa uvavanye inqanaba lokubuyisa le-0.786. Oku kubonisa ukuba isalathiso siya kuphakama kwaye sifikelele kwinqanaba lokongezwa kwe-1.272. Oku kubonisa ukuba intengiso inokubuyela umva kuloo nqanaba.
I-US30USD ngoku ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kubonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Ii-SMAs zitshibilika phezulu zibonisa uptrend.
Isalathiso se-US30USD sifikelela kwinqanaba lama-25600 kwaye sibuyela umva. Isalathiso siya kuphinda siqhubeke kwakhona xa ukuxhathisa okuncinci kwaphuliwe. Isalathiso siya kudibana ngaphezulu kwenqanaba lama-26000.
I-FTSE100 (i-UKX) ibangelwe kuLuhlu olungezantsi kweNqanaba 6200
I-UKX okwangoku ikwi-uptrend. Isabelo sithengisiwe kwaye sifikelele kwinqanaba eliphezulu lama-6284. Intengiso iyehla emva kokumelana nokuphakama kwamva nje. Ukuhla okukhoyo ngoku kunokufikelela kwinqanaba eliphantsi le-6000 ngaphambi kokuqalisa kwakhona.
Ii-SMAs zijongela phezulu zibonisa uptrend. Ii-SMAs zine-crossover ekhulayo. Iintsuku ezingama-21 ze-SMA ziwela ngaphaya kweentsuku ezingama-50 ze-SMA ezibonisa imeko yonyuselo. Ukuhla okuye kutshanje kuye kwafikelela kwinqanaba lama-54 le-Index yamandla ahlobene. Oku kubonisa ukuba ixabiso likummandla we-downtrend kwaye kunokwenzeka ukuba liwe.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, imarike yitshaneli enyukayo. Ukusukela ngeveki ephelileyo kaMeyi, intengiso ibikukunyuka. Olu hlaselo luye lwachaswa njengoko amaxabiso esenza ezantsi. Isabelo siya kuwa kwaye sifikelele kumgangatho ophantsi wenqanaba 6000 okanye 5800.
Iimarike zingaphantsi kwe-75% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kubonisa ukuba isabelo okwangoku sikwi-bearish umfutho. Isenzo sexabiso sibonisa umqondiso we-bearish ngexesha lokubhala. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zijongela phezulu zibonisa uptrend.
Isabelo se-UKX ngoku siwela emva kokumelana kwinqanaba le-6200. Imarike kulindeleke ukuba inyuke emva kokubuyiswa kwakhona. Imarike iya kuphinda ibuye xa iwela kumgca wenkxaso. Isabelo sinokuwela kwinqanaba lama-5800 ukuba inqanaba le-6000 yenkxaso yaphuliwe.
I-NZD / i-USD ikwi-Uptrend, Ukuchasana kwamadabi kwinqanaba le-0.62000
I-Kiwi ikwisiteshi esinyukayo. Kutshanje, imakethi ifikelele kwinqanaba eliphezulu le-0.62284 kwaye yabuya umva. Ukunyuka okuphezulu kuye kwaphazamiseka ekuchaseni kwe-0.62000. Imakethi iyatshintsha ingaphantsi kwenkcaso njengoko iinkunzi zeenkomo ziye zasilela ukwaphula uxhathiso.
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 ze-SMA zithambekele phezulu zibonisa ukuba phezulu. Ii-SMAs zine-crossover ekhulayo. I-Kiwi inyuke yaya kwinqanaba lama-62 kwi-Index ye-Relative Strength Index. Oku kubonisa ukuba esi sibini sikwi-uptrend kwaye nangaphezulu komgangatho osembindini we-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sikwimarike yenkomo. Umzimba wekhandlela wokulungisa uvavanye inqanaba lokubuyisa le-0.236 yeFibonacci. Oku kubonisa ukuba xa i-uptrend iqala kwakhona, intengiso iya kufikelela kwinqanaba le-4.236 yenqanaba leFibonacci. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iya kuqala ukunyuka iye kwinqanaba le-1.272 yolwandiso. Emva koko, ixabiso liya kudlulela kulwandiso olulandelayo lude lufike kwinqanaba eliphezulu le-4.236.
Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihamba zisiya phezulu zibonisa phezulu. Isibini singaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa umfutho we-bearish. Oku kuchasene nesenzo sexabiso esikwi-bullish umfutho.
I-Kiwi ikwi-uptrend. Imakethi ifikelele kwinqanaba le-2.0 yenqanaba lokwandiswa kweFibonacci kodwa yabuyela kwinqanaba le-1.272. Idola yaseNew Zealand inokuthi iphinde iqhubeke kwakhona. Kwicala elingaphezulu, ukuba iinkunzi zeenkomo ziye zaphula ukuxhathisa kwinqanaba le-0.62000, intengiso iya kuthi rally ngaphezulu kwe-0.62500.
IBhanki eNkulu yaseRashiya yokuHamba ngePlatform ye-E-Mortgage ye-blockchain
Ukuhlaziywa: 29 May 2020
I-Central Bank yaseRashiya ngoku isebenza kwinkqubo yedijithali yokubolekwa kwemali, eza kuqhutywa yi-blockchain, ngokwephepha lakutshanje. Olu xwebhu lucebisa ukuba i-blockchain ibizwa ngokuba yi-Masterchain kwaye iyakhiwa kwingingqi.
I-Central Bank yase-Russia sele isingenisile isicelo esisemthethweni kumasebe afanelekileyo aseburhulumenteni, kubandakanya ne-State Registration, i-Cadastre, kunye ne-Cartography Service (i-Rosreestr). Iqonga le-blockchain belikhuthaza ukubambeka kwidijithali, kuba liceba ukumilisela iqonga elizayo.
Ibhanki yaseRussia ebambiseneyo-neFinTech Association-isungule i-Masterchain kwi-2017. Yinethiwekhi yokuqala ye-blockchain yaseRussia ukufumana imvume ye-Federal Security Service (FSB).
Isetyenziswe ngaphambili ukuququzelela i-e-mboleko, Masterchain. Inkxaso-mali yeBhanki yakwaRaiffeisen, emva kukaSeptemba 2018, iveze amaphepha kwimicimbi yemali mboleko ebandakanya ixesha, umthwalo wekhredithi, kunye nolunye ulwazi ngabantu ababandakanyekayo kuthengiso lobambiso lweMasterchain.
Ukusetyenziswa kwe-blockchain eRashiya yinto enomdla kwinkqubela phambili kunye nokwandiswa. Kodwa urhulumente akayinyamezeli imali yokukhupha imali, nokuba unemali eninzi.
Emuva ngo-Matshi, u-Alexey Guznov, intloko yesebe lezomthetho kwiBhanki Ephakathi yase-Russia, wabhengeza umthetho oyilwayo obonisa ukuba ii-cryptocurrensets "zinobungozi obungenasizathu."
Amanye amaQonga eBlockchain
Ngelixa iProvenance blockchain iphuhliswe ziiTekhnoloji zoMzobo, iqonga lokugcina imali mboleko eliqale lagxila ekubambiseni imali.
Ikwazise ibhloko ye-blockchain-backed home equity lines yeentengo zemboleko kunye nemveliso yokubuyiselwa kwemali mboleko. Amaqabane e-Natwest Bank kunye neCoadjute yokwandisa inkqubo yokubambisa.
ISebe leMihlaba laseDubai, kwenye indawo, lisebenza kwi-blockchain-based mortgage platform kunye neMashreq Bank.
tags block Chain, IBhanki eNkulu yaseRashiya, Masterchain, RHASHIYA
IJapan 225 (JP225USD) Iyaqhubeka nokuHamba okuPhezulu, ukuXhathisa iiMfazwe kwinqanaba lama-22000
IJapan 225 yinto ephezulu. Isalathiso siphule uxhathiso lwangaphambili lwe-20500 kwaye lusondela kwinqanaba le-22000. Umzimba wekhandlela wokulungisa uvavanya inqanaba lokubuyisa le-0.50 yeFibonacci. Oku kumisela ubungakanani be-bullish run. Isalathiso sinokunyuka kwaye sifikelele kwinqanaba lokwandiswa kwe2.0 Fibonacci. Ngamanye amagama, ukuba iinkunzi zeenkomo ziye zaphula ukuxhathisa kwinqanaba lama-22000, intengiso iya kuphakama ngaphezulu kwenqanaba lama-24000.
IJapan i-225 inyukele kwinqanaba lama-69 leNdawo yokuDityaniswa kwaMandla. Isondela kwingingqi ethengiweyo. Kukho ithuba lokuqhubela phambili ukuya phezulu. Intengiso iphantsi kolawulo lwenkunzi. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika phezulu zibonisa uptrend.
IJapan 225 (JP225USD) yeXesha eliPhakathi leTrend: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sikwisiteshi esinyukayo. Ixabiso liphakanyisiwe kwaye lifikelele kwinqanaba eliphezulu lama-22000. Okwangoku ijongene nokuchasana kwinqanaba lama-22000. Ixabiso lenze ulungiso olufutshane kodwa laphinda laqala ukuya phezulu. Isalathiso siyenyuka ukuzama ukuphikisa kwinqanaba lama-22000.
IJapan i-225 ngoku ingaphezulu kwe-60% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Iibhendi ze-stochastic zenza i-U-turn ebonisa ukunyuka okuphezulu. Oku kubonisa ukuba ixabiso likwi-bullish umfutho. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu zibonakalisa ukunyuka okuphezulu.
IJapan 225 inyathelo eliya phezulu ngoku lijamelene nokumelana kwinqanaba lama-22000. Ukunyuka okuphezulu kunokwenzeka ukuba kuqhubeke ukuba uxhathiso lwangoku lophukile. Ngokwesixhobo seFibonacci isalathiso sinokunyuka.
Isalathiso sokudibanisa iShanghai SE (SHCOMP) esidityanisiweyo phakathi kwenqanaba lama-2800 ukuya kuma-2900
Amanqanaba okuGxila aphambili: 2900, 3000, 3100
Amanqanaba enkxaso aphambili: 2800, 2700, 2600
Isalathiso seShanghai SE sokudityaniswa kwesixokelelwano (i-SHCOMP) yeXabiso leXesha ekuHanjiswa ngalo: iBullish
I-SHCOMP okwangoku ijelo elithe tyaba. Isalathiso siwele kwinkxaso engaphezulu kwe-2800 emva kokumelana kwinqanaba le-2900. Ixabiso lokudibanisa ngaphezulu kwenqanaba lama-2800, njengoko i-SHCOMP iphinde yaqala enye into. Nangona kunjalo, ukuba inqanaba lama-2900 laphuliwe, intengiso iya kunyuka iye kwinqanaba lama-3100.
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zithambeka ngokuthe tye zibonisa uptrend. I-SHCOMP ikwinqanaba lama-50 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Oku kubonisa ukuba intengiso ikummandla wonyuselo kwaye kunokwenzeka ukuba inyuke.
Isalathiso seShanghai SE esiDityanisiweyo (i-SHCOMP) kwiXesha eliPhakathi leTrend: iBullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sikwisiteshi esinyukayo. Ukusukela nge-8 kaMeyi, abathengi bafumana ubunzima bokungena kwi-2900 ukumelana. Ixabiso lithengisile ngaphantsi koxinzelelo. Nangona kunjalo, uxinzelelo lokuthengisa ukusuka kuxhathiso lutyhala ingqekembe kwinkxaso elandelayo engaphezulu kwe-2800. Namhlanje, imarike iqale kwakhona ukunyuka okuphezulu ukubuyisa ukuphikiswa kwentloko.
Isalathiso se-SHCOMP okwangoku singaphantsi kwe-40% yoluhlu lweStochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwi-bullish umfutho kwaye kunokwenzeka ukuba inyuke. Ii-SMAs zijongela phezulu zibonisa uptrend.
Isalathiso se-SHCOMP sisesendleleni yokuhamba ecaleni. Ukunyuka okuphezulu kusongelwa kukumelana kwinqanaba lama-2900. Ikhefu elingaphezulu kokuxhathisa liya kubonisa umqondiso wokunyuka okuphezulu.
Ukuqhekeka kwe-EURJPY kwiXesha eliPhambili le-119.00 ngoLwesihlanu
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-ngoMeyi 29
Imali eqhelekileyo yaseYurophu inyuke ngoLwesihlanu ngokuchasene neJapan Yen malunga neepips ezingama-80 okanye iipesenti ezingama-0.75. Ngexesha leseshoni yanamhlanje yorhwebo, isibini semali siwele umqobo othe tyaba kwinqanaba le-119.00. I-greenback ngokuthe ngcembe ilahlekelwa ngumhlaba phakathi kotshintsho ekuphelelweni kokuphela kwenyanga, njengoko ukungavisisani kwezorhwebo e-US-China kuqhubeka kungathinteleki.
Amanqanaba okumelana: 122.87, 121.15, 119.00
Amanqanaba enkxaso: 118.00, 116.22, 114.39
Isibini semali siwele amanqanaba aphezulu athe tyaba kwi-119.00 ngexesha leseshoni yanamhlanje yokurhweba ngaphambi kokufudukela emantla kuvavanyo lwenqanaba le-119.99. Zonke izinto ziqwalaselwe, ireyithi yotshintshiselwano ye-EURJPY inokuhla ngaphakathi kweseshoni elandelayo yorhwebo. Bear abatyali zimarike banomdla wokunyanzela intengiso ukuya kwinqanaba le-118.52.
Nangona kunjalo, ukuba iyabuya emva kweseshoni elandelayo yokurhweba, iqela lokuxhasa elenziwe ngumndilili ohambayo kunye nomgangatho wokunyuka okwenyukayo kwinqanaba le-13 unokuqhubeka nokubonelela ngenkxaso yenqanaba lotshintshiselwano lwemali. Ngaphandle koko, uvakalelo kwimeko yesaphulelo inokuhlala i-bearish.
Ukunyuka kwe-EURJPY ukusuka kwinqanaba le-114.39 kusaqhubeka kwaye ukwehla kwinqanaba le-122.87 kufanele ukuba kulungiswe ngcono. Ukonyuka okungaphezulu kunokubonwa ekuqaleni njengoko kubonisiwe yonke imihla, ukuya kwinqanaba le-121.15 lokumelana. Ezantsi, nangona kunjalo, ulwaphulo lwenqanaba le-117.08 linokuthetha ukuphelisa ukubuyela umva kunye nokubuyisela umva kwicala eliphantsi.
Njengoko i-EURJPY ihlala isesichengeni kutyekelo oluphezulu kwithuba elizayo, ulwaphulo phantsi kwenqanaba lenkxaso le-118.00 lunokuhambisa ubuthathaka kwindawo yokuxhasa eyi-117.50 / 117.08. Kwelinye icala, umntu unokubona ukumelana kufutshane nenqanaba lamaxabiso le-119.99.